Wed, Jul 8, 2020 at 12:39am
सरकारले चियासम्बन्धी स्पष्ट नीति नल्याउँदा घट्यो निकासी
इलाम, ६ भदौ विदेशबाट नेपाल आयतित वस्तु वर्षेनी बढिरहेका बेला नेपालबाट बाहिर निर्यात हुने नगदे बाली चिया भने घटेको देखिएको छ । देशको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित चिया आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को तुलनामा २०७५-७६ मा घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । देशको व्यापार सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण हिस्सा राख्ने चिया निर्यात घट्दा भने व्यापार सन्तुलन गर्नसमेत समस्या हुने देखिन्छ । आव २०७४-७५ को भन्दा..
अमेरिकी डलरको भाउ आकासिन थाल्यो, रेमिटेन्स पठाउनेलाई फाइदा !
काठमाडौं, ६ भदौ । अमेरिका-चीन व्यापार युद्धका कारण विस्तारै उक्लिन थालेको डलरको भाउ अघिल्लो साता भारतले जम्मुकस्मिर बारे लिएको महत्वपूर्ण निर्णयका कारण उचालिएको हो । अमेरिकी डलरको भाउ फेरि ४० पैसाले बढेर ११५ रुपैयाँ २० पैसा पुगेको छ । करिव तीन सातामा डलरको भाउ ४ रुपैयाँ ८३ पैसाले बढेको छ । स्वतन्त्र राज्यका रुपमा रहेको जम्मु कस्मिरलाई केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत ल्याए लगत्तै भारु..
मान्म, ५ भदौ जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरेपछि रोजगारीका लागि भारत जाने यहाँका बासिन्दा गाउँमै रोजगारी पाउन थालेका छन् । नगरपालिकाले बेरोजगारलाई गाउँमा नै रोजगारी दिने उद्देश्यले श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरेर रोजगारका अवसर उपलब्ध गराएकाले भारत जानेहरु गाउँमा रोजगार बन्न थालेका हुन् । नगरपालिकाले गाउँमै उक्त बैंक स्थापना गरेपछि भारतमा रोजगारी गर्ने दिनको अन्त्य भएको वडा नं–२ का..
लायन्स क्लबद्वारा १२० जनालाई व्यावसायिक तालीम प्रदान
बनेपा, ५ भदौ लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ टेम्पल पिस काभ्रे पनौतीको आयोजनामा १२० जनालाई व्यावसायिक तालीम प्रदान गरिने भएको छ । क्लबको आयोजनामा पनौती नगरपालिका र लायन्स क्लबका डिस्ट्रिक गभर्नर इन्दु लम्सालको सहयोगमा पनौती नगरपालिकाभरिका १२० जनालाई तालीम प्रदान गरिने भएको हो । विद्युत, प्लम्बिङ र कार्पेन्टरसम्बन्धी तीन महीने तालीम हुने क्लबका पूर्वअध्यक्ष भोला थापाले बताउनुभयो । तालीमका लागि डिस्ट्रिक गभर्नरबाट ८०..
काठमाडाँै, ४ भदौ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच शिष्टाचार भेट वार्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सो भेटमा चिनियाँ कम्पनीबाट नेपालमा भइरहेका निर्माणकार्यको समीक्षाका साथै चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको प्रगतिको विषयमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा तत्कालका लागि काठमाडौँ–कोदारी, काठमाडौँ–रसुवागढी र कोरला नाकामार्फत आवागमन आबद्धता बढाउने विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको..
महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य सहित तीज व्यापार मेला हुने
काठमाडौँ, ४ भदौ महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र महिला चेम्बरले संयुक्त रुपमा यही भदौ ६ गतेदेखि दोस्रो तीज व्यापार मेला २०७६ आयोजना गर्ने भएको छ । जमलस्थित चेम्बर भवनमा दुई दिनसम्म चल्ने सो मेलामा महिला उद्यमी व्यवसायीले आफ्ना सिर्जनात्मक उत्पादन र सेवाको प्रदर्शनी गर्नेछन् । मेलामा काठमाडौँका महिलाद्वारा प्रवद्र्धित ५० फार्म÷कम्पनी, सङ्घ–संस्थाको सहभागिता रहने चेम्बरले जनाएको छ ।..
सिरुटारमा ८ वर्षपछि साधारणसभा : एउटा धारा जडान गर्न रु ४० हजार
भक्तपुर, ४ भदौ सूर्यविनायक नगरपालिका–१ सिरुटारमा सञ्चालित सिरुटार खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई एक महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्न सांसददेखि नगरपालिकासमेतले निर्देशन दिएको छ । विसं २०५२ मा स्थापना भई हाल एक हजार २०० घरपरिवारलाई पानी वितरण गर्दै आएको समितिले १८ वर्षसम्म साधारणसभा नगरेको, लेखापरीक्षण नगरेको, आयव्यय सार्वजनिक नगरेको र समितिका कर्मचारीले व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएपछि वडा कार्यालयमा आज भएको सर्वपक्षीय बैठकले एक..
३ दिनदेखी स्थिर सुनकाे मूल्य फेरि बढ्याे, कति पुग्याे ?
काठमाडौं, ४ भदाै । नेपाली बजारमा ३ दिनदेखि स्थिर रहेकाे सुनकाे मूल्य फेरी बढेकाे छ । बुधबार सुनको भाउ तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेको हाे। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ बुधबारका लागि प्रतितोला ७१ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। आइतबारदेखि ७१ हजारमा काराेबार भएकाे सुनकाे मूल्य आज प्रतिताेला ७१ हजार ३ सय पुगेकाे हाे । यसअघि भदौ १ गते तोलामा ५ सय रुपैयाँ घटेर..
बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले देखायो यस्तो सक्रियता
काठमाडौँ, ३ भदौ बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सरकारले सक्रियता देखाएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापनदेखि बन्देजसम्मका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले पाँचवर्षे व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभिन्न निकायको एकीकृत तथा समन्वयात्मक प्रयासद्वारा व्यापार घाटालाई कम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको सो कार्ययोजनामा सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । कार्ययोजनामा सरकारका विभिन्न १४..
नेपाल अझै ऋणबाट आत्तिनु पर्दैन, यस्तो छ अरु मुलुकको ऋणको अवस्था, कुन देश कति ऋणमा ?
काठमाडौँ, ३ भदौ प्रत्येक वर्ष नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढेको तथ्यांक सार्वजनिक हुने गर्छ । सरकारको ऋण बढेपछि नेपालीको ऋण स्वत्तः बढ्छ । हाल एक नेपालीको थाप्लोमा ३९ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ ऋण पर्न आउँछ । देश अहिले १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । गत वर्ष (२०७५/०७६) नेपाललाई साढे १३ प्रतिशतले ऋण थपिएको छ । हाल कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ३०.०६..
भिसिटिएसप्रति उद्योगी तथा व्यवसायीहरु उत्सुक
सोमबार, भाद्र २, २०७६ साल
खस्यौली, २ भदौ मालवस्तु तथा ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) प्रति रुपन्देहीका उद्योगी तथा व्यवसायी उत्सुक देखिएका छन् । रुपन्देही उद्योग सङ्घले आज बुटवलमा आयोजना गरेको भिसिटिएस, प्यान तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीले विभिन्न जिज्ञासा राख्दै सो सम्बन्धी विषयमा जानकारी लिएका छन् । सो अवसरमा प्रदेश नं ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले सरकारले नयाँ प्रणालीगत सुधार..
भरतपुरको वाणिज्य बैंकमा आगलागी, अधिकांश सामान जलेर नष्ट
भरतपुर, २ भदौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित चौबीसकोठी चोकमा रहेको भवनमा आज बिहान आगलागी भएको छ । बिहान ७ः३० बजेदेखि लागेको आगो डेढ घण्टामा नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । दुई तले सो भवनको आगलागीबाट तल्लो तलाका अधिकांश सामान जलेर नष्ट भएका छन् । शाखा प्रमुखको कार्यकक्ष जलेर ध्वस्त भएको छ..
काठमाडौँ, २ भदौ । नेपाल आयल निगमले आफ्नै ब्रान्डमा खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डर उत्पादन गर्ने भएको छ। निगमले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न तीन स्थानमा ग्यासको भण्डारणगृह निर्माण गरी ग्यास सिलिन्डर उत्पादन गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि निगमले कार्यक्रमसमेत स्वीकृत गरिसकेकोे छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ मा झापाको चारआली, प्रदेश २ मा जनकपुरको महेन्द्रनगर र प्रदेश ३ मा..
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको घाटा साढे तीन करोड !
चुरियामाई, १ भदौ सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग आठ दिन बन्द हुँदा रु तीन करोड ८४ लाख घाटा भएको छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार एकदिन उद्योग बन्द हुँदा रु ४८ लाख घाटा हुने गरेको छ । भट्टीको फायर ब्रिक्स् खसेपछि आठ दिनसम्म उद्योग बन्द हुँदा सो रकम बराबरको घाटा भएको हो । मर्मतपछि उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको छ । किल ब्रिक्स्..
विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले जनही ७ हजार बोनस पाउने, तलब पनि बढ्याे
काठमाडौं, १ भदाै । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले जनही ७ हजारका दरले बाेनस पाउने भएका छन् ।प्राधिकरणले ३४ औ वार्षिकोउत्सवको अवसरमा कर्मचारीहरुलाई बोनस दिने भएको हाे । आइतबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित प्राधिकरणको ३४ औं वार्षिकोत्सव विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणले आर्जन गरेको मुनाफाबाट कर्मचारीलाई बोनस उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए । उनले सबै तहका कर्मचारीलाई..
ह्वात्त घट्यो सुनको मूल्य,कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ, १ भदौ । लगातार उकालो लाग्दै गएको सुनको मूल्यमा आईतबार सामान्य गिरावट देखिएको छ । शनिबार प्रतितोला रु ७१ हजार ५०० मा कारोवार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु ५०० ले घटेर रु ७१ हजार कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । तेजाबी सुनको मूल्य पनि सामान्य घटेको छ । तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ५०० ले..
काठमाडौँ, ३२ साउन सरकारी स्वामित्वका संस्थान एकपछि अर्को गर्दै घाटामा गइरहेका र बन्द भइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उच्च प्रतिफल हासिल गरेको छ । एकाध व्यक्तिको प्रयत्न तथा राजनीतिक नेतृत्वको सही दृष्टिकोण भयो भने सफलता प्राप्त गर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण प्राधिकरणले पेश गरेको छ । प्राधिकरणले भदौ १ गते आफ्नो स्थापनाको ३४ औँ वर्षगाँठ मनाउन गइरहेको छ । कुनै बेला..
काठमाडौँ, ३० साउन निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटिडको लाभकरसम्बन्धी विवादको फैसला आगामी भदौ ५ गतेका लागि सरेको छ । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मातला माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला लेख्नको काम नसएिको उल्लेख गर्दै आगामी भदौ ५ गते निर्णय सुनाउने तय गरेको हो । एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरीद बिक्री हुँदा भएको लाभकर..
ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, कतिमा हुदैछ काराेबार ?
काठमाण्डौं, ३० साउन । सुनको भाउ बिहीबार तोलामा १२ सय रुपैयाँ बढेको छ। सुन बिहीबार तोलाको ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो भाउ अहिलेसम्म कै महंगो हो। बुधबार तोलामा ७ सय रुपैयाँ घटेर सुन तोलाको ७० हजार ३ सय रुपैयाँमा झरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बिहीबार प्रति औंस १५ सय २२ डलर..
एनसेल कर विवाद : सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउँदै
काठमाडौँ, ३० साउन । टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निर्णय सुनाउँदैछ । जेठ २१ गतेदेखि सुनुवाइ भए पनि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासलाई ठूला करदाता कार्यालयले भने अनुसार ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन आदेश गर्ने कि एनसेल नै भने अनुसार १२ अर्ब ३४ करोड मात्र बुझाउन आदेश दिने भन्ने निर्णय गर्न सकस परेको थियो..
काठमाडौँ, २९ साउन नेपाल राष्ट्र बैंकले जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्न र विभिन्न कोणबाट आएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ऐनको परिधिभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको उमेरहद सम्बन्धी विषयअघि सारिएको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपालले ९२ प्रतिशत निक्षेप कर्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्न बंैक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति र..
प्रतिताेला ७ सयले घट्याे सुनकाे मूल्य, केहि दिन अझै घट्ने
काठमाडौं, २९ साउन । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य केही घटेको छ । बुधबार सुनको मूल्य प्रतिताेला ७ सयले घटेकाे हाे । मंगलबार प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज ७ सय घटेर प्रतितोला ७० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि छापावाल सुनको उक्त मूल्य निर्धारण गरेको हो । त्यसैगरी, तेजावी सुनको मूल्य..
एक वर्षमै साढे ३४ अर्बको सुन आयात ! अर्थशास्त्रीले दिए यस्तो सुझाव
काठमाडौँ, २९ साउन । मुलुकको व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी बढेका बेला सुनमात्रै साढे ३४ अर्बको आयात भएको छ। उच्च व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्ने संकेत देखिएकाले विलासी वस्तु सुन आयात घटाउन सरकारले उपाय खोज्नुपर्ने देखिएको छ। अर्थशास्त्रीहरु पनि व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले तत्कालका लागि विलासी वस्तु आयात कम गर्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिन्छन्। भन्सार विभागका अनुसार आव ०७५/७६ मा..
सुनको भाउ फेरी बढ्यो, प्रतितोला १ हजारले वृद्धि
काठमाडौँ, २८ साउन पछिल्लो पाँच दिनदेखि स्थिर रहेको सुनको मूल्य आज फेरि वृद्धि भएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला रु एक हजारले बढेर रु ७१ हजार पुगेको छ । सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला रु ७० हजारमा कारोबार भएको थियो । तेजावी सुनसमेत बढेको छ । तेजावी सुन प्रतितोला रु एक हजारले वृद्धि भई रु ७०..
मृतकका परिवारलाई २५ लाख राहत
बेत्रावती, २८ साउन बालुवा उत्खनन गरेको खाल्डोमा डुबेर ज्यान गुमाएका दुई जनाको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप जनही रु २५ लाख उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै पीडित परिवारले शव बुझेका छन् । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–१ कोल्पुखोला किनारमा अवैधरुपमा बालुवा उत्खननको क्रममा बनेको खाल्डोमा परेर सोमबार स्थानीइवासी १३ वर्षीया विनिता बलामी र उनलाई बचाउन गएकी सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–३ की ३५ वर्षीया लक्ष्मी तामाङको..
सरकारले करको दायरा विस्तारमा गत वर्ष के-के गर्यो ?
काठमाडौँ, २८ साउन अर्थमन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको (२०७५/०७६) अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण सार्वजनिक गर्दैै करको दायरा विस्तारमा भएका कार्यहरु उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष १ लाख ९९ हजार १ सय ६६ करदातालाई व्यावसायीक प्यान र २ लाख २९ हजार ८ सय ५० जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) थप वितरण भएको छ । उल्लेखित विवरणमा व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका..
विद्यतु प्राधिकरणले एक वर्षमै कमायो ७ अर्ब २० करोड, चुहावट १५ प्रतिशतमा झर्‍यो
काठमाडौँ, २८ साउन गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । सिंहदरबारमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ७ अर्ब २० करोड नाफा भएको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा साढे २ अर्ब मात्र नाफा भएको थियो । यो तुलना गर्दा २०७४–७५ मा भन्दा १४९ प्रतिशतले धेरै..
सरकारी अध्ययनले नै भन्यो– मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक
काठमाडौँ, २८ साउन । बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । तरकारीमा गरिएको विषादी परीक्षण, आन्तरिक उत्पादन कमी हुनु, बाढीपहिरो, ढुवानीमा लगाइएको भ्याटलगायतका कारणले बजारमा अस्वभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । तरकारीमा गरिएको विषादी परीक्षण, आन्तरिक उत्पादन कमी हुनु, बाढीपहिरो, ढुवानीमा लगाइएको भ्याटलगायतका कारणले बजारमा..
विराटनगर, २७ साउन बजारमा तरकारीको मूल्य घटेपछि उपभोक्तालाई राहत मिलेको छ । एक महीना अघि तरकारीको मूल्यमा एक्कासी वृद्धि भएपछि उपभोक्ता मारमा परेका थिए । अत्यधिक वर्षासँगै बाढी आएपछि तरकारी नष्ट भएको थियो । तरकारी नष्ट भएसँगै मूल्य वृद्धि भएपछि यहाँका बासिन्दाको दैनिक जीवन प्रभावित बनेको थियो । प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगरमा अहिले हरियो तरकारीको मूल्य घटेको छ । स्थानीय..
आर्थिक वृद्धिदरमा विश्वका १ सय ७० देशलाई पछि पार्‍याै‌ं : रघुवीर महासेठ
काठमाडौं, २७ साउन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले नेपालको बारेमा अहिले विश्वभरि प्रशंसा भैरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिले आर्थिक वृद्धिको दरले र विकास निर्माणको दृष्टिकोणले वर्तमान सरकार विकासशील देशहरुमध्ये डेढ सय देशहरुलाई पछाडि पार्दै अगाडि बढेको दाबी गरे । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिमा हामी विश्वका १७० देशलाई पछि..
Results 1679: You are at page 13 of 56